“Ma jiraan wax lacag oo laaluush ah aan weydiistay Marwo Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Ma jiraan wax lacag oo laaluush ah aan weydiistay Marwo Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan..”
Suldaan C/raxmaan Suldaan C/qani oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa si kulul u beeniyay hadal cod ah oo dhawaan lagu baahiyay qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida.
Warbaahinta Soomaalida qaarkood ayaa dhawaan baahiyay hadal cod ah oo ay sheegeen inay Marwo Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan kasoo duubtay suldaan C/raxmaan Suldaan C/qani, xilli uu lacag laaluush ah weydiisanayay.
“Ma jiraan wax lacag oo laaluush ah aan weydiistay Marwo Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan, waxay ahayd oo kaliya inaa ku wargeliyey inay is af-gartaan musharaxa kale ee iyada la tartami lahaa, waxaana kula taliyay inay musharaxaasi siiso kharash, si uu ugu tanaasulo” Sidaasi waxaa yiri suldaan C/raxmaan Suldaan C/qani.
Dhinaca kale, warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleeyso ayaa sheegaya in Marwo Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan ay xafiisyada xeer-ilaalinta iyo guddiga doorashada dalka u gudbisay codka suldaankaasi oo ka codsanayo inay bixiso lacag laaluush ah, islamarkaana ugu hanjabaya inaan loo codeyn doonin hadii ay bixin weyso lacagtaas.
Suldaan C/raxmaan ayaa ku eedeeyay Marwo Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan inay doonaysay inay joojiso doorashada beelaha dega gobolada waqooyi ee Somaliland, isagoona hadalkiisa raaciyay inay haatan iyada u xayiran yihiin.
Sidoo kale, suldaanka ayaa ugu baaqay Marwo Fowziya inay kusoo biirto doorashada islamarkaana ay iska diiwaan geliso Ergadda doorashada, si loogu darro tartanka doorashada.
Ugu dambeyntii, suldaan C/raxmaan Suldaan C/qani ayaa sheegay inay qadka teleefanka ay kuwada xiriireen isaga iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, islamarkaana ay ka wada hadleen arrimaha lagu soo eedeynayo.
Marwo Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa diiday inay faah faahin dheeraad ah ka bixiyo arrintaan la sheegayo inay ku sameeysay suldaan C/raxmaan Suldaan C/qani.
Waxay sheegtay in kiiska Suldaanka uu haatan hor-yaalo xeer ilaaliyaha guud iyo guddiga doorashadda dadban ee dalka, islamarkaana ay iyaga go’aan ka gaari doonaan.